Microtine ကြွက်များတွင်အမ်ဖီတမင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများ - Monogamous နှင့် Promiscuous Vole မျိုးစိတ်များ (၂၀၀၇) ကို အသုံးပြု၍ နှိုင်းယှဉ်လေ့လာချက် - သင်၏ ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ
Microtine ကြွက်များတွင်ဖက်တမင်းဆေးပြားအကျိုးသက်ရောက်မှု: Monogamous နှင့်ကရာ Vole မျိုးစိတ်အသုံးပြုခြင်းတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှု (2007)
comments: မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles များသည်လူသားများကဲ့သို့သော pair တစုံနှောင်ကြိုး (social monogamy) ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ နို့တိုက်သတ္တဝါများ၏ ၃% သာလျှင်နှောင်ကြိုးကိုတွဲဖက်နိုင်သည်။ ဒီလေ့လာမှုမှာနှောင်ကြိုးနဲ့တွဲဖက်နိုင်စွမ်းကတိရစ္ဆာန်တွေကိုစွဲလမ်းစေနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ စွဲစွဲလမ်းမှုသည် dopamine ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သောနှောင်ကြိုးယန္တရားကိုအပိုင်စီးသည်။
Microtine ကြွက်များတွင်ဖက်တမင်းဆေးပြားအကျိုးသက်ရောက်မှု: Monogamous နှင့်ကရာ Vole မျိုးစိတ်အသုံးပြုခြင်းတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်လေ့လာ
neuroscience ။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC ဇန်နဝါရီ 21, 2008 အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
neuroscience ။ စက်တင်ဘာ 21, 2007; 148 (4): 857-866 ။
အွန်လိုင်းဇူလိုင် 17, 2007 ထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1016 / j.neuroscience.2007.07.011
MICROTINE ကြွက် IN ဖက်တမင်းဆေးပြားအကျိုး: MONOGAMOUS နှင့်ကရာ VOLE မျိုးစိတ်အသုံးပြုခြင်းနှိုင်းယှဉ်သငျတနျး
ဂျေသောမတ်စ် Curtis နှင့် Zuoxin ဝမ်
ကျနော်တို့လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုအကြားအလားအလာ interaction ကဆနျးစစျဖို့မတူညီသောမိတ်လိုက်စနစ်များကိုပြကြောင်း vole မျိုးစိတ်များ၏နျူကလိယ accumbens အတွက်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ကျနော်တို့သို့သော် monogamous voles ကရာ voles လုပ်ခဲ့တယ်ထက်စိတ်ကြွဆေးကုသမှုပြီးနောက် extracellular dopamine အတွက်အားကြီးမဟုတ်တော့-တည်မြဲတိုးခဲ့ Basal extracellular dopamine အတွက်မျိုးစိတ်သို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုမရှိ, တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ထို့နောက် extracellular dopamine အတွက်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်တိုး monogamous voles အတွက်တစ်စုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်သွေးဆောင်နိုင်ရှိမရှိဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့တိရိစ္ဆာန်များ pair တစုံ-နှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးတားစီးဖို့လူသိများသော D1 အဲဒီ receptor ကို Activation, ထပ်မံလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါမှ pretreated ခဲ့ကြသည်မဟုတ်လျှင်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine တိုးပွားလာနေသော်လည်း, စိတ်ကြွဆေးအုပ်ချုပ်ရေးအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံ-ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်သွေးဆောင်မပြုခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤရလဒ်သည်ထောက်ခံမှုအကြံပြုချက်များကြောင်းလူမှုရေးပူးတွဲမှုနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုရှယ်ယာတစ်ဘုံအာရုံကြောအလွှာဟာ။
keywords: မိတ်လိုက်စနစ်, pair တစုံ-နှောင်ကြိုး, dopamine, နျူကလိယ accumbens, စွဲလမ်း, microdialysis
အဆိုပါ genus Microtus (voles) အရွယ်ရောက်ပြီးသူအကြားတစ်စုံ-Bond အခြေခံသည့်ဖြစ်စဉ်များကိုလေ့လာရန်အတွက်တိရစ္ဆာန်များ၏တစ်ဦးစံပြအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ နညျးလမျးမြားစှာအတွက်အတော်လေးဆင်တူသော်လည်းကွဲပြားခြားနားသော vole မျိုးစိတ် (ကရာကနေစျမယားအထိမိတ်လိုက်စနစ်များကိုအမျိုးမျိုးပြသDewsbury, 1981; Shapiro နှင့် Dewsbury, 1990; ကုရှ et al ။ , 2001) ။ ဥပမာအားဖြင့်, မြက်ခင်း (Microtus pennsylvanicus) နှင့် montane (အမ် montanus) voles ကရာမိတ်လိုက်စနစ်များကိုဖော်ပြရန်သာအမျိုးသမီးမိဘစောင့်ရှောက်မှုပေး။ ဤအမျိုးစိတ်မှာတော့ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကွဲပြားခြားနားသောနယ်မြေများကိုခုခံကာကွယ်သီးခြားအသိုက်သိမ်းပိုက်, နှင့် (အိမ်ထောင်ဖက်အကြားတစ်စုံ-ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ဖွဲ့စည်းကြဘူးShapiro နှင့် Dewsbury, 1990; Insel et al ။ , 1995) ။ ဆနျ့ကငျြ, မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ (အမ် ochrogaster) နှင့်ထင်းရှူး (အမ် pinetorum) voles ရေရှည်, monogamous pair တစုံ-ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ဤအမျိုးစိတ်မှာတော့ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းနှစ်ဦးစလုံးမိဘစောင့်ရှောက်မှုပေးနှင့်နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာခြင်းငှက်သိုက်ဝေမျှနှင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျွမ်းတဝင်မရှိသော conspecifics (ဆန့်ကျင်ဘုံနယ်မြေကိုခုခံကာကွယ်Getz et al ။ , 1981; Hofmann et al ။ , 1984; Gruder-အဒမ်နှင့် Getz, 1985).
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကစုဆောင်းထားသည့်သက်သေအထောက်အထားများသည်ဗဟို dopamine စနစ်များ၊ အထူးသဖြင့် mesocorticolimbic“ ဆုလာဘ်များ” လမ်းကြောင်းများအတွက် monogamous စုံနှောင်ကြိုးများဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်အဓိကကျသောအခန်းကဏ္ established မှထူထောင်ခဲ့သည်။ ယနေ့အထိရလဒ်များ, pair တစုံ - နှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးကာလအတွင်း ventral tegmental (ရိယာ (VTA) တွင်စိတ်လှုပ်ရှားလှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းသွားကြောင်းအကြံပြု, နျူကလိယ accumbens (NAcc) တွင် dopamine လွှတ်ပေးရန်တိုးမြှင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည်Gingrich et al ။ , 2000, Curtis နှင့်ဝမ်, 2005) ။ NACC ၏ anterior shell ကိုတစျပိုငျးကို (သို့သော်မ posterior shell ကိုဒါမှမဟုတ်အမာခံအတွက်) အတွင်း, dopamine (pair တစုံ-ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်နှင့်အတူဆက်စပ်မိတ်ဖက် preference ကိုအပြုအမူသွေးဆောင် D2-type အမျိုးအစား receptors မြှင့်လုပ်ဆောင်Gingrich et al ။ , 2000; Aragona et al ။ , 2003; Aragona et al ။ , 2006) ။ ဆနျ့ကငျြ, ပြီးသား pair တစုံ-ကပ်လျက်တည်ရှိဖြစ်ကြောင်းတစ်ဦးချင်းစီအဘို့, D1-type အမျိုးအစား dopamine receptors ၏ activation (တစ်စက္ကန့် pair တစုံ-နှောင်ကြိုးများဖွဲ့စည်းရေးတားစီးဖို့အစေခံစေခြင်းငှါ conspecific သူစိမ်းဆီသို့ရန်အပြုအမူကိုထုတ်လုပ်Aragona et al ။ , 2006).
အဆိုပါ mesocorticolimbic dopamine စနစ်ကလည်း (မူးယစ်ဆေးစွဲနေတဲ့အဓိကအခန်းကဏ္ဍကိုယ်ပိုင် et al ။ , 1998; yun et al ။ , 2004) နှင့်စာရေးသူအတော်များများသည်စွဲလမ်းစေသောအရာဝတ္ထုများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာတွယ်တာမှုကိုကြားဝင်ဖြန်ဖြေပေးသည့်ဗဟိုဖြစ်စဉ်များကို“ ပြန်ပေး” သည်ဟုအကြံပြုကြသည် (ချေးငှားခြင်းနှင့်စမစ်, 2002; Panksepp et al ။ , 2002; Insel, 2003) ။ ထိုသို့သောအကြံပြုချက်လူမှုရေးအထီးကျန်စွဲလမ်းတ္ထုများ (၏ Self-အုပ်ချုပ်မှုများအတွက်အစွမ်းထက်လှုံ့ဆော်မှုကြောင်းကိုလေ့လာတွေ့ရှိချက်များကထောက်ခံနေသည်Howes et al 2000) ။ အနည်းငယ်လေ့လာမှုများတိုက်ရိုက်လူမှုရေးစဘွန်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုအကြားအလားအလာ interaction ကစုံစမ်းပြီဖြစ်သော်လည်း, pair တစုံ-နှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးဖျန်ဖြေသောလုပ်ငန်းစဉ်များအများအပြားပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုဖျန်ဖြေသောလုပ်ငန်းစဉ်များအကြားအလုပ်လုပ်တဲ့ Analogues ရှိသည်ဖို့ပေါ်လာပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, စွဲလမ်းတ္ထုများများစွာကို (VTA အတွက် excitatory သွင်းအားစုနှင့် / သို့မဟုတ်တုံ့ပြန်မှုပြောင်းလဲKalivas နှင့် Duffy, 1998; Saal et al ။ , 2003) ။ ထို့ပြင်ယင်းသို့စိတ်ကြွဆေးအဖြစ်မူးယစ်ဆေးဝါးများကို (NACC အတွင်း extracellular dopamine အတွက်သိသာထင်ရှားသောတိုးထုတ်လုပ်ရန်Zocchi et al ။ , 2003) နှင့်မကြာခဏရှိ caudal / rostral ဖြစ်ကြောင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောတုံ့ပြန်မှုအတွက်အဓိက / shell ကိုကွဲပြားခြားနားမှု (Heidbreder နှင့် Feldon, 1998; di Chiara, 2002) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ D1- နှင့် D2-type အမျိုးအစား dopamine receptors မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူအပေါ်ဆန့်ကျင်သက်ရောက်မှုများထုတ်လုပ်နိုင်သည်; D2 activation မူးယစ်ဆေး-ရှာလျော့ကျစေပါတယ်စဉ် D1 activation မူးယစ်ဆေးရှာကြံစတင်။ (ကိုယ်ပိုင် et al ။ , 1996).
pair တစုံ-Bond နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှစ်ဦးစလုံးအတူတူစနစ်များပါဝင်ကတည်းကနှစ်ခုစလုံးဖြစ်စဉ်များ neurotransmission ပြောင်းလဲမှုများ (ပါဝင်နိုင်ပြီးကတည်းကSaal et al ။ , 2003; Aragona et al ။ , 2006), ကနှစ်ခုဖြစ်စဉ်များအပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုကွိုးစားအားထုစေခြင်းငှါစိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖြစ်နိုင်ချေနှင့်ကိုက်ညီအားလူမှုရေးဆက်ဆံမှု (ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုကိုလျော့ကျစေနိုင်တယ်Recio Adrados, 1995; Ellickson et al ။ , 1999; ခေါင်းလောင်း et al ။ , 2000) သို့မဟုတ်ယခင်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုထံမှပြန်လည်နာလန်ထူအတွက်ကူညီစေခြင်းငှါ (Havassy et al ။ , 1995) ။ ထို့အပြင်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုအဆိုးလူသားတွေအတွက်တစ်စုံ-Bond impact စေခြင်းငှါလက္ခဏာများရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု (လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းနှင့်ကွာရှင်း၏ပုံစံများကိုထိခိုက်တွေ့ရှိထားသည်ယာမာဂူချီနှင့် Kandel, 1985; Kandel et al ။ , 1994; Kaestner, 1995) ။ ကံမကောင်းစွာပဲအတော်လေးနည်းနည်းထိုကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများကြိုးပမ်းခဲ့တယ်စေခြင်းငှါအရာအားဖြင့်ယန္တယားနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုတှငျကြှနျုပျတို့ဖြစ်စေပုံစံသို့မဟုတ်တစ်စုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ဖွဲ့စည်းရန်မ vole မျိုးစိတ်အတွက်မျိုးစိတ်-ပုံမှန်မိတ်လိုက်စနစ်များဆက်နွယ်နေကြောင်းစေခြင်းငှါစိတ်ကြွဆေးအုပ်ချုပ်ရေးမှတုံ့ပြန်မှုအတွက်အလားအလာမျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုဆနျးစစျဖို့နှိုင်းယှဉ်ချဉ်းကပ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ပြီးတော့စိတ်ကြွဆေး-နှိုးဆွ dopamine လျတ် monogamous voles အတွက်တစ်စုံ-ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်သွေးဆောင်နိုင်ခြင်းရှိမရှိစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။
လိင်ရင်တော့မှားမယ်အရွယ်ရောက်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာနှင့်မြက်ခင်း voles အတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် extracellular dopamine ၏အဆင့်ဆင့်နှင့် dopamine metabolites DOPAC နှင့် HVA အပေါ်စိတ်ကြွဆေးကုသမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဘာသာရပ်များတောင်ပိုင်းအီလီနွိုက်ပြည်နယ်ကနေလူဦးရေကနေဆင်းသက်တော်မူသည်သိမ်းရပ်ကြီးအထီးရှိကြ၏။ ကိုလိုနီထွက်-ကူးမျိုးဗီဇပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အခါအားလျော်စွာခဲ့ကြသည်။ ခွေးများတစ် 21L နှင့်အတူ (20 × 50 × 40 စင်တီမီတာ) အသက် ~ 14 ရက်ပေါင်းမှာနို့နှင့်ပလပ်စတစ် shoebox စတိုင်လှောင်အိမ်ထဲမှာအတူတူလိင်အားလုံး၌ကျိန်းဝပ်ခဲ့ကြသည်: 10D photoperiod နှင့် ကြော်ငြာ libitum အစားအစာ (Purina ယုန် Chow အနက်ရောင်ရေနံနေကြာမျိုးစေ့များနှင့်အတူဖြည့်ဆည်း) နှင့်ရေ။ တိရစ္ဆာန်များအပတ်စဉ်အိတ်များသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါမျိုးစိတ်နှင့်လေ့လာခြင်းသီးခြားစီသျောခဲ့ကြသည်။ အားလုံးလုပျထုံးလုပျနညျးဟာဖလော်ရီဒါပြည်နယ်တက္ကသိုလ် Institutional တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီကအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
Microdialysis စုံစမ်းစစ်ဆေးဆောက်လုပ်ရေးနှင့် implantation
Microdialysis စုံစမ်းစစ်ဆေးယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြ (Curtis et al ။ , 2003) ကိုတက်ကြွစွာဧရိယာများ မှလွဲ. မီလီမီတာနှင့်အမြှေးပါးများ၏မော်လီကျူးအလေးချိန် cut-off 1.5Kd ခဲ့ 18 ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီဒီဇိုင်းနှင့်အတူအာကာသယာဉ် 5-7% တစ် dopamine ပြန်လည်နာလန်ထူရှိသည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးဘယ်ဘက်နျူကလိယ accumbens သို့ stereotaxically (bregma ထံမှသြဒီနိတ်: 2.1 မီလီမီတာ, နှစ်ဦးနှစ်ဖက် 0.6 မီလီမီတာ, ventral 6.3 မီလီမီတာ anterior) ကိုထညျ့သှငျးခဲ့သညျမေ့ဆေး pentabarbitol ဆိုဒီယမ်အောက်မှာ (1 / 10 MG bodyweight ကီလိုဂရမ်) နှင့်တိရိစ္ဆာန်များနေ့ချင်းညချင်းကိုပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေး 2.3 MM NaCl, 144 MM KCl, 2.8 MM CaCl (ဆိုဒီယမ်, ပိုတက်စီယမ်, ကယ်လစီယမ်နှင့်မဂ္ဂနီဆီယမ်အဘို့အဖြေတစ်ခု isotonic နှင့်အတူ 1.2 ul / မိနစ်မှာစဉ်ဆက်မပြတ် perfused ခဲ့ကြသည်2နှင့် 0.9 MM MgCl2 (Sved နှင့် Curtis, 1993)) ။
နမူနာစုဆောင်းခြင်းနှင့် dialysate ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
Dialysate နမူနာ 5N Perchloric acid တို၏ 0.1ul ်ဖလားသို့စုဆောင်းလေ့လာသည်အထိချက်ချင်း -80 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာအေးခဲခဲ့ကြသည်။ Dialysate dopamine ၏အဆင့်ဆင့်, DOPAC နှင့် HVA လြှပျစစျထောက်လှမ်း (ECD, ESA, Inc, Chelmsford MA, အမေရိကန်နိုင်ငံ) နှင့်အတူမြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အရည် Chromatography (HPLC) ကို အသုံးပြု. ဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုနမူနာအဘို့, dialysate ၏ 45ul ကော်လံပေါ်ထိုးသွင်းခံခဲ့ရသည်။ Analytics 150 MM ဆိုဒီယမ် dihydrogen ပါဝင်သည်ဟု (နှုန်းကို 0.7 ul / မိနစ်စီးဆင်း) မိုဘိုင်းအဆင့်နဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့သီးခြားစီ Module (ရေ, Inc, Milford MA, USA) ကို အသုံးပြု. နှင့် MD-75 ကော်လံ (ESA, Inc) ကွဲကွာခဲ့ကြ ဖော့စဖိတ် monohydrate (EM သိပ္ပံဝါရှင်တန်, PA, USA), 1.7 mM 1-octanesulfonic အက်ဆစ်ဆိုဒီယမ်ဆား (Sigma, စိန့်လူးဝစ်, MO ကို, အမေရိကန်), 0.01% triethylamine (Aldrich, အမေရိကန်နိုင်ငံ), 25uM EDTA (Fisher သည်, Pittsburg, PA , အမေရိကန်), သော pH ~ 3.0ml / 2% ဖော့စဖောရက်အက်ဆစ် (Fisher က) ၏ဌနှင့်အတူ 85 မှချိန်ညှိ။ Analytics ထောက်လှမ်း -400mV မှာလျှော့ချရေးခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, 350mV မှာနမူနာ oxidizing ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ dopamine မြင့်မားသောအမြတ်မှာလျော့ချရေးထိပ်ကို အသုံးပြု. quantified နေစဉ် DOPAC နှင့် HVA နိမ့်အမြတ်မှာဓာတ်တိုးထိပ်ကို အသုံးပြု. quantified ခဲ့ကြသည်။ peak ဒေသများလူသိများအာရုံစူးစိုက်မှု၏စံချိန်စံညွှန်းများ အသုံးပြု. ထုတ်လုပ်ထိပ်နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့် (pg Analytics / 45 ul, အာကာသယာဉ်ပြန်လည်နာလန်ထူမှုအတွက်တညျ့မဟုတ်) ပမာဏကူးပြောင်းခဲ့ကြသည်။ dopamine များအတွက်အရေအတွက်ကန့်သတ် ~2pg / 45 ul ဆေးထိုးခဲ့ပါတယ်, နှင့်ထောက်လှမ်းန့်သတ်ချက် ~ 0.5 pg / 45 ul ဆေးထိုးခဲ့ပါတယ်။
အရံစိတ်ကြွဆေးကုသမှု acute ဆိုးကျိုးများ
နေ့ချင်းညချင်းနာလန်ထူပြီးနောက်လေး 20 မိနစ်အခြေခံနမူနာကောက်ယူခဲ့သည့်အပြီးတစ်ဦးချင်းစီအထီး 200ul / 40g ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၏ဆားသို့မဟုတ် 3mg / ကီလိုဂရမ်စိတ်ကြွဆေး်ဆား၏လည်းကောင်းတစ်ဦး intraperitoneal (ip) ဆေးထိုးလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ နမူနာထို့နောက်သုံးနာရီနှစ်ဆယ်မိနစ်ကြားကာလမှာစုဆောင်း HPLC-ECD သုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။
နျူကလိယ accumbens အတွင်းစိတ်ကြွဆေး၏ဆိုးကျိုးများ
တစ်ဦးချင်းစီမျိုးစိတ်အထီးနှစျယောကျအပိုဆောင်းအုပ်စုများ dopamine ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်နမူနာစုဆောင်းနေချိန်မှာပြောင်းပြန် microdialysis မှတဆင့် NACC သို့တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်စိတ်ကြွဆေး၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ပထမဦးဆုံးအုပ်စု, အခြေခံနမူနာပြီးနောက်, Dialysis အရည်အခြားနှစ်နာရီများအတွက်စံ Dialysis အရည်မှပြန်လာသဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သုံးနှစ်ဆယ်မိနစ်နမူနာကာလအဘို့ 1 MM စိတ်ကြွဆေးင်တဦးမှ switched ခဲ့သည်။ ဒါဟာစမ်းသပ်မှုစိတ်ကြွဆေးကုသမှုအကျယ်ချဲ့စိတ်ကြွဆေးရေတိုရေရှည်တုံ့ပြန်မှုကိုအကဲဖြတ်ဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့သည်။ ဒုတိယအုပ်စု, အခြေခံနမူနာပြီးနောက်, Dialysis အရည် 100 um စိတ်ကြွဆေးင်တဦးနဲ့အစားထိုးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောကျစိတ်ကြွဆေးအဆင့်ဆင့်တိုင်းစက္ကန့်နမူနာပြီးနောက်အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်တက်အပူတပြင်းခဲ့ကြသည်။ စမ်းသပ်ပြီးဖက်တမင်းဆေးပြားပြင်းအား 0, 100, 200, 400 နှင့် 800 um နှင့် 1 MM ခဲ့ကြသည်။ ကဖြေရှင်းချက်များအကြားအပြောင်းအလဲများအောက်ပါစုံစမ်းစစ်ဆေး၏တက်ကြွသောဧရိယာရောက်ရှိဖို့စိတ်ကြွဆေး၏အသစ်တစ်ခုကိုအာရုံစူးစိုက်မှုအဘို့ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 12 မိနစ်လိုအပ်သောကတည်းကစိတ်ကြွဆေး၏ပစ်မှတ်အာရုံစူးစိုက်မှုမတိုင်မီမှသုံးမိနစ်ပစ္စုပ္ပန်ခဲ့စဉ်တစ်ခုချင်းစီကိုအာရုံစူးစိုက်မှုမှာပထမဦးဆုံးနမူနာ, တစ်သငြ်ကူးေူပာင်းမြနမူနာခဲ့သည် ပြီးတော့တစ်ဦးချင်းစီအာရုံစူးစိုက်မှုမှာဒုတိယနမူနာကာလ, တလျှောက်လုံး။ ဒါဟာစမ်းသပ်မှုရေရှည်စိတ်ကြွဆေးကုသမှုတုံ့ပြန်မှုကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်စမ်းသပ်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။
အဆိုပါ microdialysis နမူနာကာလ၏အဆုံးမှာတိရိစ္ဆာန်များဆိုဒီယမ် pentabarbitol တစ်ခုအလွန်အကျွံပေးခဲ့ခြင်းနှင့်ဦးနှောက်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေရာချထားမှုကို၏အကဲဖြတ်ဘို့ဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည်။ ဦးနှောက်အဏုဆလိုက်ပေါ်သို့နွေးထွေး-တပ်ဆင်ထားခဲ့ NACC မှတဆင့်တစ်ဦး cryostat နှင့်ကဏ္ဍများအပေါ်40μmမှာ sectioned ခဲ့ကြသည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးနေရာချထားလောလောလတ်လတ်တပ်ဆင်ထားတစ်ရှူးအတွက်, ဒါမှမဟုတ်အချို့ကိစ္စများတွင် nissl စွန်းတစ်သျှူးအတွင်းအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ နေရာချထား၏ပြဌာန်းခွင့်အားဖြင့်ဖော်ပြထားတဲ့ဒေသဆိုင်ရာ delineations သုံးပြီးခဲ့ Paxinos နှင့် Watson (1998)။ အဆိုပါ Corpus callosum ၏ genu အဆိုပါ NACC အတွင်း posterior နေရာချထားထံမှ anterior delineate ဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ပုဒ်နှင့်အတူသူတို့ ventricle မှ lateral အဆိုပါ NACC core ကိုအတွက်ဖြစ်ဖို့စဉ်းစားခဲ့ကြစဉ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ventricle မှပုဒ် medial နှင့်အတူအာကာသယာဉ်သည် NACC shell ကိုအတွက်ဖြစ်ဖို့စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။ လေ့လာမှုမှာပါဝင်ဘို့, တက်ကြွစွာဧရိယာအနည်းဆုံး 80% အဓိကသို့မဟုတ် shell ကိုဖြစ်စေအတွင်းတွင်သာဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ တစ်ဦးထက်ပိုဒေသ၏သိသာထင်ရှားသောဝေမျှသရုပ်ဆောင်ကြောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးနှင့်အတူတိရစ္ဆာန်များဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။
မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအပေါ်စိတ်ကြွဆေးကုသမှုဆိုးကျိုးများ
ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်မှု, အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles (ဎ = 7-10 / အုပျစု) တွင်ဆားသို့မဟုတ် 200, 40, ဒါမှမဟုတ်စိတ်ကြွဆေး၏ 0.5 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်ပါဝင်သောဆား၏ 1.0 ul / 3.0 ဆခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၏ ip ထိုးလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအထီးထို့နောက် Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွဲပြီးခြောက်နာရီဆင်တူအရွယ်အစားနှင့်အသက်အရွယ်တစ်ခုလိင် Non-လက်ခံ, ovariectomized အမျိုးသမီးနှင့်အတူတွဲခဲ့သည်။ တစ်ဦးချင်းစီ pair တစုံအဖွဲ့ဝင်များအကြားအပြန်အလှန်မိတ်လိုက်တွဲပြီးကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါဘူးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးကုသမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အလားအလာအပြုအမူလိုငွေပြမှုအကဲဖြတ်ရန်ကြောင့်နောက်ဆက်တွဲစိစစ်အတည်ပြုဘို့ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ကြသည်။
ချက်ချင်းခြောက်နာရီတွဲပြီးကာလအောက်ပါစီအထီး (ကမိတ်ဖက် preference ကိုအဘို့အစမျးသပျခံခဲ့ရWilliams က et al ။ , 1992) ။ အခြားယောက်ျားအပြန်အလှန်ဘယ်တော့မှခဲ့သောနှင့်အတူတစ်ကျွမ်းတဝင်မရှိသောအမျိုးသမီးပါရှိသောစဉ်စမ်းသပ်မှု (20 × 50 × 40 စင်တီမီတာ) နှစ်ခုတူညီအိတ်များ, အရာတစျခုမှပြွန်အားဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားပြီးတစ်ဦးကြားနေလှောင်အိမ်ပါဝင်သည်သည့်မိတ်ဖက် preference ကိုများအတွက်ယန္တရားဟာအကျွမ်းတဝင်အမျိုးသမီးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ပါရှိသော ။ အထီးဘာသာရပ်သုံးခုစလုံးအိတ်များမှထိန်းချုပ်မရရှိမှုခဲ့စဉ်အမျိုးသမီး, သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာအိတ်များအတွက် tethering တို့အရှင်အချင်းချင်းမျှအဆက်အသွယ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ယင်းချိတ်ဆက်ပြွန်ကိုဖြတ်ပြီးအလင်း-ထုပ်တစ်စီးရီးကိုအသုံးပြုပြီးတစ်ဦးကစိတ်ကြိုက်ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ် ( R. Henderson, ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်တက္ကသိုလ်) ကိုအိတ်များအကြားထီး၏လှုပ်ရှားမှုကိုစောင့်ကြည့်။ စမ်းသပ်ခြင်း3ဇကြာခဲ့သည်။ တနည်းကား, တိရစ္ဆာန်အသေးစိတ်အမူအကျင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ကြသည်။ အကဲဖြတ် Variables ကို Affiliate အပြုအမူတစ်ခုတိုင်းတာမှုအဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီလှုံ့ဆော်မှုအမျိုးသမီး, ယေဘုယျ Non-လူမှုရေးအပြုအမူတစ်ခုတိုင်းတာမှုအဖြစ်ကြားနေလှောင်အိမ်ထဲမှာနေခဲ့ရသည်အချိန်ပမာဏကိုနှင့်တစ်ဦးအတိုင်းအတာအဖြစ်အိတ်များအကြားဖြတ်၏နံပါတ်နှင့်အတူအနီးကပ်ထိတွေ့သုံးစွဲအချိန်ကိုထည့်သွင်း ခြုံငုံလှုပ်ရှားမှု။
ဒုတိယစမ်းသပ်မှုများတွင်အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles SCH100 ၏ 23390 ug / ကီလိုဂရမ်တစ် D1-type အမျိုးအစား dopamine အဲဒီ receptor ရန်နှင့်အတူ (ip) ထိုးသွင်းခဲ့ကြသည်။ သုံးဆယ်မိနစ်အကြာတွင်အသီးအသီးအထီးမော်တော်ယာဉ်သို့မဟုတ် 1mg / ကီလိုဂရမ်စိတ်ကြွဆေး (ip) တစ်ခုခုကိုလက်ခံရရှိ,6ဇများအတွက်အမျိုးသမီးနှင့်အတူတွဲ, ပြီးတော့အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့တစ်ဦးမိတ်ဖက် preference ကိုများအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့သည်။
dialysate dopamine ၏အကြွင်းမဲ့အာဏာပမာဏဒေသဆိုင်ရာနှင့်ကှဲလှဲလေ့လာခြင်း (ANOVA) ကအခြေခံပမာဏ (Statistica) ၏ကုသမှု-အုပ်စုများနှိုင်းယှဉ်အကြားမျိုးစိတ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဤအနှိုင်းယှဉ်ဘို့အစီအဟိတ်တိရစ္ဆာန်များအတွက်လေးခုအခြေခံနမူနာယုတ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါ ANOVAs များတွင်အသုံးပြုအချက်များများ၏အမျိုးမျိုးသောပေါင်းစပ်၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ရလဒ်နှင့်အတူတင်ပြကြသည်။ Basal DOPAC နှင့် HVA များအတွက်မျိုးစိတ်နှိုင်းယှဉ်လွတ်လပ်သော t-စမ်းသပ်မှုသုံးပြီးလုပ်ခဲ့ကြသည်။
အခြားနှိုင်းယှဉ်မှုများအရ၊ dopamine ပမာဏနှင့်၎င်း၏ metabolites ပမာဏနှင့်အခြေခံနှင့်အမ်ဖီတမင်းအမ်တမ်နမူနာများတွင်အခြေခံတန်ဖိုးပမာဏ၏ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားတန်ဖိုးများထို့နောက်ထပ်ခါတလဲလဲအတိုင်းအတာအဖြစ်အချိန်ကိုဖြတ်ပြီး analyte ငွေပမာဏအတွက်ပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံ ANOVAs အတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဖြစ်ရပ်အနည်းငယ်တွင်ပျောက်ဆုံးနေသောနမူနာများ၏တန်ဖိုးများကိုထပ်မံတိုင်းတာမှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤကိစ္စများတွင်သင့်လျော်သောအချိန်ကာလအတွက်နမူနာအားလုံး၏ပျမ်းမျှတွက်ချက်သည်။ ထို့နောက်ပျမ်းမျှ interpolation ကိုပျောက်ဆုံးနေသောတန်ဖိုး၏ဒုတိယခန့်မှန်းချက်ကိုထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အဲဒီတန်ဖိုးနှစ်ခုရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကိုပျောက်သွားတဲ့နမူနာတန်ဖိုးကိုအစားထိုးခဲ့ပါတယ်။ ဆန်းစစ်ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သောမည်သည့်တိရိစ္ဆာန်မျှဤနည်းဖြင့်ထုတ်လုပ်သည့်နမူနာတန်ဖိုးတစ်ခုထက်မပိုပါ။ ကျောင်းသား - Neuman-Keuls (SNK) post-hoc ဆန်းစစ်ခြင်းသည်အဓိကကျသောသက်ရောက်မှုများသို့မဟုတ်အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုများ (p <0.05) ကိုထပ်မံဆန်းစစ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ တနည်းကား, ANOVAs အတွက်အသုံးပြုအမျိုးမျိုးသောအချက်များ၏ဖော်ပြချက်ရလဒ်နှင့်အတူတင်ပြနေကြသည်။ နမူနာတစ်ခုကိုအခြေခံနှင့်ခြားနားစွာထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အတွက်ထိုနမူနာသည် SNK post hoc ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအရအခြေခံနမူနာ ၄ ခုအနက်အနည်းဆုံးသုံးခုမှသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားရမည်။ မိတ်ဖက် ဦး စားပေးမှုအပေါ်ကုသမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုများသူစိမ်းနှင့် vs. နီးစပ်သူနှင့်နီးကပ်စွာအဆက်အသွယ်အတွက်သုံးစွဲအချိန်ပမာဏအဘို့အုပ်စုနည်းလမ်းများနှိုင်းယှဉ်ဖို့တွဲဖက် t-tests သုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ မိတ်ဖက် ဦး စားပေးစမ်းသပ်မှုအတွင်းအခြားအပြုအမူများကိုစစ်ဆေးမှုကို ANOVAs ဖြင့် ပြုလုပ်၍ သိသာထင်ရှားသောအဓိကသက်ရောက်မှုများသို့မဟုတ်အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုများကိုတွေ့ရှိသည့်အခါ SNK post hoc ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အားလုံးတိရိစ္ဆာန်များအတွက်စမ်းသပ်ချက်၏အချိန်မှာအနည်းဆုံး 66 ရက်ပေါင်းအဟောင်းနှင့်အရှင်လိင်ရင့်ကျက်ခဲ့သညျ။ တိရိစ္ဆာန်များ၏ယုတ်အသက်အရွယ်က F (မျိုးစိတ်အကြားဖြစ်စေကွာခြားခဲ့ပါဘူး1,49 = 0.17, p = 0.68) သို့မဟုတ်ကုသမှုအုပ်စုများ (F ကို4,49 = 0.01, p = 0.94) ။
မျိုးစိတ်ဒေသနှင့် Basal dopamine အဆင့်ဆင့်၏ Sub-နျူကလိယနှိုင်းယှဉ်
ANOVA အခြေခံ dopamine အဆင့်ဆင့်ကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်တစ်ဦးကသုံးလမ်း။ 48 တိရစ္ဆာန်များ၏တစ်ဦးကစုစုပေါင်း (ထိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေရာချထားစံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပုံ 1) 20 caudal နှင့် sub-နျူကလိယ (ဎ = 28 core ကို;;) ဒေသ (ဎ = 29 rostral 19 မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles;) မျိုးစိတ် (ဎ = 18 အတွက်ပါဝင်ဘို့ voles Meadows 30 shell ကို) နှိုင်းယှဉ်။ Basal extracellular dopamine (စားပွဲတင် 1) F (မျိုးစိတ်အကြားကွဲပြားဘူး1,40 = 0.08, p = 0.78), Sub-အရေးပါ (F ကို1,40 = 0.85, p = 0.36), သို့မဟုတ် rostral / caudal အဆင့်ဆင့် (က F1,40 = 0.33, p = 0.57) နှင့်မျှမကစာရင်းအင်းသိသိသာသာ interaction ကရှိခဲ့သည်။
မျိုးစိတ်နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွင်း Basal extracellular dopamine ၏ Sub-နျူကလိယနှိုင်းယှဉ်။ တန်ဖိုးများကို pg / dialysate ၏45μl (± sem ဆိုလို), အသီးအသီးအုပ်စုထဲမှာတိရစ္ဆာန်များ၏နံပါတ်များကိုကွင်းအတွင်းပြသနေကြပါတယ်။ p-တန်ဖိုးများကိုအဓိကအဘို့ပေးထားကြသည် ...
အထီးမြက်ခင်းများနှင့်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles (တစ်ဦးချင်းစီမျိုးစိတ်အဘို့ဎ = 200) ဆားမော်တော်ယာဉ် ip ၏ 40ul / 5g ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၏တစ်ခုခုလက်ခံရရှိသို့မဟုတ်3မီလီဂရမ် / စိတ်ကြွဆေး၏ကီလိုဂရမ်ပါဝင်သောဆား၏ (ဎ = 8 voles,6မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles Meadows) ။ အချက်များအဖြစ်မျိုးစိတ်နှင့်ကုသမှုကို အသုံးပြု. two-လမ်း ANOVA (အခြေခံ dopamine အဆင့်ဆင့်မကွဲပြားမှုထင်ရှားစားပွဲတင် 2) ဖြစ်စေမျိုးစိတ်အကြား (F ကို1,23 = 1.29, p = 0.27) သို့မဟုတ်ကုသမှုအုပ်စုများအကြား (F ကို1,23 = 0.97, p = 0.33), သိသိသာသာအပြန်အလှန် (F ကိုရှိခဲ့သည်ပေမယ့်1,23 = 5.11, p = 0.04) ။ post-hoc မြက်ခင်း voles (p = 0.08) အတွက်စိတ်ကြွဆေးနှင့်ဆားအုပ်စုများအကြားတစ်ဦးမဖြစ်စလောက်ကွာခြားချက်ရှိခဲ့ပါသည်သော်လည်းအပြန်အလှန်၏အကဲဖြတ်မျိုးစိတ်အတွင်းသို့မဟုတ်ကုသမှုအုပ်စုများအကြားမျှသိသာ pair တစုံပညာရှိကွဲပြားခြားနားမှုဖော်ပြခဲ့တယ်။
မျိုးစိတ်နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွင်း Basal extracellular dopamine ကုသအုပ်စုကိုနှိုင်းယှဉ်။ တန်ဖိုးများကို dialysate ၏စာမျက်နှာ / 45μl (± sem ဆိုလို), ကွင်းများတွင်တိရစ္ဆာန်များ၏နံပါတ်များကိုဖြစ်ကြသည်။ p-တန်ဖိုးများကိုတစ်ဦးနှစ်ဦး-လမ်းမှအဓိကသက်ရောက်မှုများအတွက်ပေးအပ်ထားတယ် ...
3mg / ကီလိုဂရမ်စိတ်ကြွဆေး၏ Peripheral အုပ်ချုပ်ရေးနှစ်ဦးစလုံးမျိုးစိတ်အတွက် NACC အတွက် extracellular dopamine အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့် (F ကို1,15 = 7.27, p <0.02); သို့သော်တိုးမြှင့်မှုပမာဏနှင့်ကြာချိန် (မျိုးစိတ်နှိုင်းယှဉ်ချက် F) ကွဲပြားသည်1,15 = 17.10, p <0.01; အချိန်အပြန်အလှန်က F အားဖြင့်မျိုးစိတ်12,180 = 2.24, p <0.02) မျိုးစိတ်အကြား (ပုံ 2) ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles မှာတော့စိတ်ကြွဆေးအခြေခံလောက် 275% အထိ extracellular dopamine တိုးလာနှင့်တဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာရှိခဲ့ပေမယ့်, dopamine အဆင့်ဆင့်မှာအနည်းဆုံး5နှစ်ဆယ်မိနစ်နမူနာကာလအဘို့အခြေခံအထက်တွင်သိသိသာသာကျန်ရစ်၏။ ဆနျ့ကငျြ, စိတ်ကြွဆေးမြက်ခင်း voles သာအခြေခံလောက် 175% အထိ extracellular dopamine တိုးလာနှင့်အဆင့်ဆင့်သိသိသာသာသာ 40 မိနစ်အခြေခံကျော်တိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။ Dopamine အဆင့်ဆင့်နှစ်ဦးစလုံးမျိုးစိတ်အတွက်ဆားကုသမှုပြီးနောက်မပြောင်းလဲခဲ့သညျ။ အဆိုပါပုံစံ dopamine ၏အကြွင်းမဲ့အာဏာပမာဏများအတွက်အဖြစ်အခြေခံကနေရာခိုင်နှုန်းကိုအပြောင်းအလဲမြင်ရ၏။ တစ်ခုချင်းစီကိုနမူနာအတွက်ပြန်လည်ကောင်းမွန် dopamine ၏အကြွင်းမဲ့အာဏာပမာဏစိတ်ကြွဆေးကုသမှုခံသောမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာနှင့်မြက်ခင်း voles အကြားနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်အခါ, တစ်ဦးသိသိသာသာမျိုးစိတ်အကျိုးသက်ရောက်မှု (F ကိုရှိခဲ့သည်13,117 = 8.09, p <0.001) ။ တစ် ဦး ချင်းအချိန်သတ်မှတ်ချက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကမည်သည့်ကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးနှင့်မဆိုကွဲပြားခြားနားမှုမရှိသော်လည်းမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသရှိ voles များသည်အမ်ဖီတမင်းအုပ်ချုပ်မှုအပြီးတွင်အမ်ဖီတမင်းအုပ်ချုပ်မှုအပြီး (၃၀.၅ - ၉.၈ pg / နမူနာ) ပိုမိုမြင့်မားသောပကတိပမာဏကိုပြသသည်။ ။
စိတ်ကြွဆေး၏ Peripheral အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွင်း extracellular dopamine တိုးလာ
ဆိုက်ကို-တိကျတဲ့အုပ်ချုပ်ရေး 1mM စိတ်ကြွဆေး၏ NACC သို့ပြောင်းပြန် microdialysis သိသိသာသာတိုးလာ extracellular dopamine အဆင့်ဆင့်ကနေတစ်ဆင့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ရန်နှစ်ဦးစလုံးမျိုးစိတ် (ဎ = 2000 အတွက်အခြေခံ၏ 3% voles နှင့်6မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles Meadows; ပုံ 3A) ။ ထို့ပြင်အဆိုပါတုံ့ပြန်မှုများ၏ပြင်းအားနှင့် Duration နှစ်ဦးစလုံးမျိုးစိတ်အလားတူခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါစိတ်ကြွဆေးအာရုံစူးစိုက်မှုနှေးကွေးစွာနာရီပေါင်းများစွာကျော်တိုးလာ (ဎ =4voles နှင့်4မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles Meadows သောအခါအလားတူပင်မျှမျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုကိုတွေ့ကြသည် ဟူ. ၎င်း, ပုံ 3B) ။ ဒီစမ်းသပ်မှုများတွင် 100 um စိတ်ကြွဆေး၏ Dialysis reverse အခြေခံလောက် 700% အထိ extracellular dopamine တိုးတက်လာခဲ့သည်။ dopamine လွှတ်ပေးရန်၏အဆင့်ကိုကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်ခဲ့ကြပေမယ့်စိတ်ကြွဆေးအာရုံစူးစိုက်မှုတစ်ခုနောက်ဆုံးဆမျှတိုးနေသော်လည်းထပ်မံတိုးမြှင့်မပေးခဲ့ပါဘူး။ Basal extracellular dopamine အတွက်ဖြစ်စေစမ်းသပ်အုပ်စုများအကြားအဘယ်သူမျှမကွဲပြားမှု (F ကိုရှိခဲ့သည်1,13 = 0.001, p = 0.97) သို့မဟုတ်မျိုးစိတ်အကြား (F ကို1,13 = 0.001, p = 0.98)
ယင်းနျူကလိယသို့စိတ်ကြွဆေး၏ Dialysis အုပ်ချုပ်ရေး reverse monogamous နှင့်ကရာနှစ်ဦးစလုံး vole မျိုးစိတ်အတွက် extracellular dopamine အဆင့်ဆင့်အတွက်သွေးဆောင်သိသိသာသာတိုး accumbens
NACC အတွက် dopamine metabolites အပေါ်ဖက်တမင်းဆေးပြားဆိုးကျိုးများ
(; t ကို = 1159.7, p = 295.9 မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ 1011.2 ± 171.4, မြက်ခင်း 0.56 ± 0.58) သို့မဟုတ် HVA (မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ 1033.5 ± 162.2, မြက်ခင်း 976.8 ± 165.7; t ကို = 0.24, p = ယေဘုယျ DOPAC ဖြစ်စေ၏အခြေခံအဆင့်ဆင့်မမျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုရှိကြ၏ 0.81) ။ စိတ်ကြွဆေး၏ Peripheral အုပ်ချုပ်ရေး DOPAC ၏ extracellular အဆင့်ဆင့်အတွက်သိသာထင်ရှားသောကျဆင်းခြင်း (F ကိုဖြစ်ပေါ်စေ12,108 = 13.54, p <0.001) (ပုံ 4A) ။ dopamine နှင့်အတူသကဲ့သို့, တုန့်ပြန်၏ပြင်းအားမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အဘို့အကြောင်းနှိုင်းယှဉ်မြက်ခင်း voles အတွက်သေးငယ်နှင့်ကြာချိန်တိုတောင်းခဲ့ပါတယ်။ ပြောင်းပြန် Dialysis မှတဆင့် NACC သို့ 1mM စိတ်ကြွဆေး၏ဆိုက်ကို-တိကျတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးသိသိသာသာ extracellular DOPAC အဆင့်ဆင့်ယုတ်လျော့ (F ကို12,132 = 23.06, p <0.001) မျိုးစိတ်နှစ်ခုလုံးအတွက် (ပုံ 4B) ။ အဆင့်ဆင့်အဆိုပါစိတ်ကြွဆေးဖြေရှင်းချက်သုံးဦးသာနမူနာအပြီးပုံမှန် Dialysis အရည်နှင့်အတူအစားထိုးခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကိုရှိနေသော်လည်းစမ်းသပ်မှု၏သင်တန်းတစ်လျှောက်လုံးစိတ်ဓာတ်ကျကျန်ရစ်၏။ အဆိုပါ NACC သို့စိတ်ကြွဆေး၏အပူတပြင်းတိုး extracellular DOPAC အဆင့်ဆင့်အတွက်ကျဆင်းခြင်း၏အလားတူပုံစံ (F ကိုထုတ်လုပ်12,48 = 15.70, p <0.001); သို့သော်ဒီအုပ်ချုပ်ရေး protocol ကိုသိသိသာသာမျိုးစိတ် (F1,4 = 17.18, p <0.02) နှင့်ကုသမှုအပြန်အလှန် (F ကိုအားဖြင့်တစ် ဦး မျိုးစိတ်12,48 = 2.24, p <0.03) ။ အုပ်စုနှစ်ခုလုံးသည် extracellular DOPAC ကိုပြသသော်လည်း၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်မြက်ခင်းပြင်များတွင်ပိုမိုအားကောင်းခဲ့သည် (ပုံ 4C) ။ HVA ၏ပြင်ပဆဲလ်အဆင့်များသည်အစွန်အဖျား (သို့) တိကျသောမျိုးစိတ်နှစ်ခုလုံးတွင်စီမံအုပ်ချုပ်မှု (ထိခိုက်မှုအားလုံး p-values> 0.20၊ အချက်အလက်များကိုမပြပါ) ကြောင့်ထိခိုက်မှုမရှိပါ။
DOPAC ၏ extracellular အဆင့်ဆင့်အပေါ်ဖက်တမင်းဆေးပြားဆိုးကျိုးများ
pair တစုံ-Bond အပေါ်ဖက်တမင်းဆေးပြားဆိုးကျိုးများ
မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်ခြောက်နာရီတစ်ဦး ovariectomized အမျိုးသမီးထိတွေ့ဆား-ကုသအထီး (Non-ရွေးချယ်ဆက်နွယ်မှုပြသပုံ 5A) နောက်ပိုင်းတွင်အကျွမ်းတဝင်အမျိုးသမီးတစ်ကျွမ်းတဝင်မရှိသော ovariectomized အမျိုးသမီး (t = 0.69, p = 0.51) အကြားတစ်ဦးရှေးခယျြမှုပေးသောအခါ။ သုံးယောက်ဆေးများမဆိုမှာဖက်တမင်းဆေးပြားကုသမှုကိုလည်းမိတ်ဖက် preference ကိုသွေးဆောင်ရန်ပျက်ကွက် (0.5 / ကီလိုဂရမ် mg: t = 0.71, p = 0.50; 1.0 / ကီလိုဂရမ် mg: t = 1.26, p = 0.29;3/ ကီလိုဂရမ် mg: t = 0.05 , p = 0.96) ။ သို့သော်စိတ်ကြွဆေး၏ 1 mg / kg (ထို D1-type အမျိုးအစား dopamine အဲဒီ receptor ရန် SCH23390 နှင့်အတူ pretreatment ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်ခွင့်အခါပုံ 5B), အထီးမိတ်ဖက် (t = 2.46, p <0.05) နှင့်အဆက်အသွယ်များအတွက် preference ကိုပြသ။ SCH23390 ကိုပေးသောတိရစ္ဆာန်များသည်ဆားဆေးထိုးခြင်းဖြင့်အခြားထိန်းချုပ်မှုအထီး (t = -0.43, p = 0.68) တွင်တွေ့ရသည့်ပုံစံနှင့်မသက်ဆိုင်သောဆက်နွယ်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ ကုသမှုတစ်စုံတစ်ရာနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိသိသာအမူအကျင့်လိုငွေပြမှုရှိခဲ့သည် (စားပွဲတင် 3) ။ အထူးသနှစ်ခုအမျိုးသမီးနှင့်အတူအနီးကပ်ထိတွေ့သုံးစွဲစုစုပေါင်းအချိန် (အုပ်စုများအကြားက F ကွာခြားခဲ့ပါဘူး5,46 = 0.46, p = 0.80) ။ အဆိုပါကြားနေလှောင်အိမ် (F ကိုအတွက်သုံးစွဲထိုကဲ့သို့သောအချိန်အဖြစ် non-လူမှုရေးအပြုအမူတွေ5,46 = 0.25, p = 0.94) နှင့် locomotor လှုပ်ရှားမှု (F ကို5,46 = 1.46, p = 0.23) ကိုလည်းကုသမှုအားဖြင့်ထိခိုက်ခဲ့သညျ။
တိရိစ္ဆာန်များ D1-type အမျိုးအစား dopamine အဲဒီ receptor activation ထပ်မံလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါမှ Pre-ကုသခံခဲ့ရသည်မဟုတ်လျှင် NACC dopamine အတွက်ဖက်တမင်းဆေးပြား-သွေးဆောင်တိုးအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေးလုပ်ရန်ဆွဲဆောင်လေ့မပြုခဲ့
3 နာရီမိတ်ဖက် preference ကိုစမ်းသပ်မှုစဉ်အတွင်းအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles နေဖြင့်ကုသမှုယေဘုယျလူမှုရေးနှင့် Non-လူမှုရေးအပြုအမူများအတွက်အုပ်စုကိုနှိုင်းယှဉ်။ ကွင်းအတွင်းပြသအုပ်စုတစ်ခုချင်းစီအတွက်တိရစ္ဆာန်များ၏နံပါတ်များကို။
voles သုံးပြီးနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုများ (မျိုးစိတ်-တိကျတဲ့မိတ်လိုက်စနစ်များနှင့်အတူကောင်းစွာ-ဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ကြောင်း neuroanatomical နှင့် neurochemical ကွဲပြားခြားနားမှုဖော်ထုတ်ခဲ့ကြInsel နှင့် Shapiro, 1992; ဝမ်, 1995; Lim က et al ။ , 2005) ။ ထို့ပြင်အများအပြားလေ့လာမှုများ (ထို pair တစုံ-Bond တချို့ဦးနှောက်ဒေသများပြန်လည်အဖှဲ့အစညျးကပါဝင်ပတ်သက်ပြခဲ့ကြBamshad et al ။ , 1993; ဝမ် et al ။ , 1994), အရှိဆုံးအထူးသ mesolimbic dopamine လမ်းကြောင်း၏ဝေမျှအတွက် (Aragona et al ။ , 2006) ။ ဒါ့အပြင် pair တစုံဘွန်းဖျန်ဖြေတစ်ခုကိုအတူတူဒေသများအချို့ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုအတွက်အရေးကြီးလှသည်ကတည်းကကျနော်တို့ voles တို့တွင်အမျိုးမျိုးသောမိတ်လိုက်စနစ်များကိုထုတ်လုပ်သောမျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုလည်းအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှမျိုးစိတ်-တိကျတဲ့တုံ့ပြန်မှုထုတ်လုပ်ရန်ရှိမရှိဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
စိတ်ကြွဆေးမှ NACC dopamine တုံ့ပြန်မှုအတွက်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှု
အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles မြက်ခင်း voles လုပ်ခဲ့တယ်ထက်ရံစိတ်ကြွဆေးအုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက် NACC အတွက် extracellular dopamine အတွက်တစ်ဦးထက်ပိုအားကောင်းတဲ့နှင့်ကြာကြာ-တည်တံ့တိုးလာပါသည်။ ဤသည်လေ့လာရေး monogamous voles ကရာမျိုးစိတ်ထက်စိတ်ကြွဆေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများပိုမိုထိခိုက်မခံမည်အကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ထို့ကြောင့် monogamous မျိုးစိတ်များတွင်ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကြွဆေးအဖြစ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အပြုသဘောအားကောင်းသက်ရောက်မှုကရာမျိုးစိတ်အားဖြင့်ကြုံတွေ့တွေထက်ပိုပြီးအားကောင်းတဲ့ဖြစ်နိုင်သည်။ တနည်းအားမူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှု (ဆန္ဒရှိဖြစ်အဖြစ်ကရာ voles များအတွက်အားဖြည့်ကြောင်းတစ်ခုစိတ်ကြွဆေးထိုး monogamous voles အတွက်ထိုကဲ့သို့သောပြင်းထန်သောတုံ့ပြန်မှုများထုတ်လုပ်နိုင်ကြောင်းညွှန်ပြနိုင်Orsini et al ။ , 2004) ။ တစ်ခုခုကိုကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနဲ့ဆက်စပ်ဗဟိုလမ်းကြောင်းပြောင်းလဲမှုများ monogamous မျိုးစိတ်အတွက်ချီးမြှင့်ခံရနိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာနှင့်မြက်ခင်း voles အတွက် Basal extracellular dopamine အဆင့်ဆင့်မဒေသဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ရ, မစိတ်ကြွဆေးကတော့ NACC သို့တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်ခွင့်အခါကျမတို့ကလည်းဘယ်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုကိုတွေ့မြင်ခဲ့သညျ။ ဤရလဒ်သည် (vole မိတ်လိုက်စနစ်များအတွက်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုဖွယ်ရှိ dopamine neurocircuitry အတွက်အခြေခံကွဲပြားခြားနားမှုကနေဖြစ်ပေါ်မနောက်ထပ်သက်သေသာဓကများကိုCurtis et al ။ , 2003) ။ ယင်းအစားမျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုဖွယ်ရှိ (dopamine လွှတ်ပေးရန်သို့မဟုတ်ရှင်းလင်းရေးအတွက်သိမ်မွေ့ကွဲပြားခြားနားမှုကနေ, dopamine receptors ၏ဖြန့်ဖြူးသို့မဟုတ်သိပ်သည်းဆအတွက်, သို့မဟုတ်အခြား neurotransmitter စနစ်များနှင့်အတူ dopamine interaction ကအတွက်ပေါ်ထွန်းလျူနှင့်ဝမ်, 2003; Lim ကများနှင့်လူငယ်, 2004) ။ စိတ်ကြွဆေးကတော့ dopamine Transporter (ပစ်မှတ်ထားပြီးကတည်းကဂျုံးစ် et al ။ , 1998), site ကို-တိကျတဲ့စိတ်ကြွဆေးအုပ်ချုပ်ရေးတုံ့ပြန်စိတ်ကြွဆေးအဆင့်ဆင့်အတွက်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုများမရှိခြင်းမျိုးစိတ် dopamine ပို့ဆောင်ရေး၏သိပ်သည်းဆသို့မဟုတ် function ကိုအတွက်ကွဲပြားကြဘူးကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ အပေါ်ယံ, စဉ်ဆက်မပြတ်စိတ်ကြွဆေးအုပ်ချုပ်ရေးတုံ့ပြန်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုများမရှိခြင်းကိုလည်းမျိုးစိတ် dopamine ထုတ်လုပ်ရန်သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်အတွက်ကွဲပြားကြဘူးကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ သို့သော်ရေရှည်တည်တံ့စိတ်ကြွဆေးကုသမှုပြီးနောက် extracellular DOPAC အတွက်မျိုးစိတ်ခြားနားချက် (ထိုကဲ့သို့သောတစ်ဦးအနက်ဆန့်ကျင်ငြင်းခုန်စေခြင်းငှါ,ဂျုံးစ် et al ။ , 1998) ။ dopamine နှင့်အတူအမျှ extracellular DOPAC အပေါ်စိတ်ကြွဆေး၏သက်ရောက်မှုရံအုပ်ချုပ်မှုအပြီးမြက်ခင်း voles အတွက်ထက် သာ. ကြီးမြတ်ခြင်းနှင့်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်ပိုရှည်ကြာချိန်ဖြင့်ပြီးကြ၏, ဒါပေမယ့်စိတ်ကြွဆေး NACC သို့တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်သောအခါမြက်ခင်း voles အတွက် သာ. ကြီးမြတ် DOPAC ကျဆင်းခြင်းရှိ၏။ တူတိရစ္ဆာန်များအတွက်စိတ်ကြွဆေးကုသမှုပြီးနောက် extracellular dopamine အတွက်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုများမရှိခြင်းပေးထားသော, ဤရလာဒ်များအနက်ကိုဘော်ပြဖို့ဘယ်လိုရှင်းလင်းသည်။ တဦးတည်းဖြစ်နိုင်ခြေမြက်ခင်း voles အတွက် site ကို-တိကျတဲ့စိတ်ကြွဆေးအုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက် extracellular DOPAC အတွက် သာ. ကြီးမြတ်လျော့ချရေးကရာ voles အတွက် intracellular dopamine ၏အောက်ပိုင်းအဆင့်ဆင့်ကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာကျနော်တို့ရံစိတ်ကြွဆေးအုပ်ချုပ်မှုအပြီးမြင်ကြမျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုရိုးရှင်းစွာစိတ်ကြွဆေး metabolize နိုင်စွမ်းအတွက်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်ခြေထွက်မအုပ်စိုးလို့မရဘူးသတိပြုရမည်ဖြစ်သည်။
ဖက်တမင်းဆေးပြားနှင့် pair တစုံ-Bond
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာဒုတိယအဓိကတွေ့ရှိချက်စိတ်ကြွဆေးကုသမှု D1 dopamine အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်းမရှိခြင်းအတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေးလုပ်ရန်ဆွဲဆောင်လေ့မပြုခဲ့ကြောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ မျက်နှာပြင်တွင်, ဒီတစ်ခုမမျှော်လင့်ဘဲရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။ NACC အတွက် extracellular dopamine အတွက်တိုး (pair တစုံ-နှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးဆက်နွယ်နေကြောင်းနေကြတယ်Gingrich et al ။ , 2000), နှင့် mesolimbic လမ်းကြောင်း၏ကာလတို activation ဖက်ဦးစားပေးသွေးဆောင်ဖို့လုံလောက် (Gingrich et al ။ , 2000; Aragona et al ။ , 2003; Curtis နှင့်ဝမ်, 2005; Aragona et al ။ , 2006) ။ အဆိုပါ microdialysis ရလဒ်များကိုစိတ်ကြွဆေးကုသမှုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်တိုးပွါးကြောင်းကိုပြသပြီးကတည်းက, တစ်ဦး တဦးတည်းစိတ်ကြွဆေးကုသမှု pair တစုံ-ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်သွေးဆောင်မယ်လို့ကြိုတင်ခန့်မှန်းပေလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ထို့နောက်စိတ်ကြွဆေးဖက်ဦးစားပေးသွေးဆောင်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့တာလဲ
အဖြေ D1- ၏ activation နှင့် D2-type အမျိုးအစား dopamine receptors (pair တစုံဘွန်းတွင်ကစားသောဆွေမျိုးအခန်းကဏ္ဍ၌အိပ်စေခြင်းငှါAragona et al ။ , 2003) ။ pair တစုံ-Bond အတွက် dopamine ပါဝင်ပတ်သက်မှု၏အစောပိုင်းလေ့လာမှုများ D2 receptors ၏ activation pair တစုံ-နှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေး facilitated နေစဉ်ကြောင်းအကြံပြု, D1 receptors (ဒီလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြဘူးဝမ် et al ။ , 1999) ။ နောက်ဆက်တွဲအလုပ်, သို့သော်, D1-type အမျိုးအစား dopamine receptors ၏ activation အမှန်တကယ် (D2 receptors ၏ pharmacological activation သို့မဟုတ်အဖော်ရှာခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေသွေးဆောင်ဖက်ဦးစားပေး၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုကာကွယ်တားဆီးကြောင်းပြသထားပါတယ်Aragona et al ။ , 2006) ။ ဒါကဆန့်ကျင်မော်ဂျူသည့် dopamine အဲဒီ receptor agonist apomorphine (ကထိုး-မှီခိုဖက်ရှင်အတွက်တစ်စုံ-ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့် induces ဆိုတဲ့အချက်ကိုအားဖြင့်ပုံအောနေသည်Aragona et al ။ , 2006) ။ အနိမ့်ပြင်းအားမှာ apomorphine pair တစုံ-Bond ဆောင်ရွက်မှုတွေ, အဓိကအား D2 receptors မှချည်နှောင်။ သို့သော်ပိုမိုမြင့်မားပြင်းအားမှာ apomorphine D1 activation ၏သက်ရောက်မှု negating, အဖြစ်ကောင်းစွာ receptors D2 မှချည်နှောင်။ အလားတူရလဒ် (extracellular dopamine အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတိုးထုတ်လုပ်ရန်ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကြွဆေးအဖြစ်မူးယစ်ဆေးဝါးများများအတွက်မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်ဟုBecker က, 1990; ငယ်ရွယ်ပြီး Rees, 1998; Yurek et al ။ , 1998) ။ ထိုသို့သောတစ်ခုတိုး dopamine receptors သာတိကျသောအစိတ်အပိုင်းအစု၏ဦးစားပေး activation ထုတ်လုပ်ရန်မရှိကြောင်း, သို့သော်မဟုတ်ဘဲအားလုံး dopamine receptors ၏ Non-တိကျတဲ့ activation ထုတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။ D1 နှင့် D2 receptors ၏တစ်ပြိုင်တည်းပါ activation (-Bond တွဲဖို့ inimical ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကAragona et al ။ , 2006), စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန် D1 ပိတ်ဆို့ထားခြင်းမရှိခြင်းအတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေးလုပ်ရန်ဆွဲဆောင်လေ့မထားဘူး။ သို့သော်ဤသို့ကြိုတင်စိတ်ကြွဆေးအပြီးအဓိကအား D1 activation အတွက် D2 ရန်ရလဒ်များကိုနှင့်အတူကုသမှုနှင့်မိတ်ဖက်ဦးစားပေးနှစ်ခုလုံးမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်းကုသမှုခံယူပြီးနောက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
ဤရလဒ်သည်ကိုလည်း pair တစုံ-Bond အတွက် D1 receptors ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြဖို့ကူညီပေးပါတယ်။ D1 activation pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်နှင့် (အလားအလာသစ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်ငြင်းပယ်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကြောင်းကောင်းသောသက်သေအထောက်အထားလည်းမရှိပေမယ့်Aragona et al ။ , 2006; Curtis et al ။ , 2006), ယခင်ကကြောင့်တစ်ဦးတည်း D1 receptors ၏ပိတ်ဆို့ pair တစုံ-ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်သွေးဆောင်ဖို့လုံလောက်ခဲ့ပါတယ်ရှိမရှိမသိရဖြစ်ခဲ့သည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုများတွင်တစ်ဦးတည်း D1 ပိတ်ဆို့မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းသွေးဆောင်ခဲ့ပါဘူး။ ထို့ကြောင့် D2 activation ၏မရှိခြင်းအတွက်ရိုးရှင်းစွာ D1 activation လျှော့ချ pair တစုံ-Bond ဖြစ်ပေါ်ရန်အဘို့အလုံလောက်မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါဟာ D1 ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများရွေးချယ်မှုစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်းအမူအကျင့်ဖိနှိပ်မှုကနေဖြစ်ပေါ်မသတိပြုသင့်ပါတယ်။ တဦးတည်းလေ့လာမှုမှာ, ဒီမှာအသုံးပြုသော D1 ရန်၏ဆေးထိုး (အချို့ရေတိုရေရှည်မော်တာချွတ်ယွင်းထုတ်လုပ်Weatherford et al ။ , 1990) ။ သို့သျောကြှနျုပျတို့သမျှသိသာမော်တာလိုငွေပြမှုကိုတှေ့လြှငျ, ကုသအထီးမိတ်ဖက် preference ကိုစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်း Non-လူမှုရေးအပြုအမူတွေအတွက်ထိန်းချုပ်မှုယောက်ျားထံမှကွာခြားခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာစမ်းသပ်မှု၏အချိန်ကိုက်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုထင်ဟပ်စေနိုင်သည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာမူးယစ်ဆေးဆေးထိုးခြင်းနှင့်အမူအကျင့် interaction က၏အစအဦးအကြားအနည်းဆုံး 30 မိနစ်ရှိခဲ့သည်နှင့်အဝေဖန်မှီခို variable ကိုမူးယစ်ဆေးကုသမှုပြီးနောက် 6-9 နာရီသည်အထိအကဲဖြတ်မခံခဲ့ရပါဘူး။ ထို့ကြောင့်အကျွမ်းတဝင်မိတ်ဖက်နှင့်အတူသုံးစွဲအချိန်အတွင်းတိုးအထီးကျန်မှုတွေအတွက်သုံးစွဲခြုံငုံလူမှုရေးအဆက်အသွယ်အပြောင်းအလဲ locomotor လှုပ်ရှားမှု, ဒါမှမဟုတ်အချိန်ရလဒ်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ယင်းအစား Affiliate အပြုအမူအတွက်ကွာခြားချက်မိတ်ဖက်နှင့်အဆက်အသွယ်များအတွက် preference ကိုမှ Non-ရွေးချယ်ဆက်နွယ်မှုကနေ switch ကိုမောင်းနှင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာအစ D1 ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကနဦးတွဲပြီးကာလအတွင်းအပြုအမူပြောင်းလဲတာဖြစ်နိုင်တယ်။ အထီးတွဲပြီးနေစဉ်အတွင်းအမျိုးသမီးနှင့်အတူပုံမှန်အားဖြင့်အပြန်အလှန်တို့အားထင်ရှားလေ၏။ အားလုံးအတွက်အတွက်တွဲပြီးကာလ၏အများစုများအတွက်လှောင်အိမ်တွေထဲကထောင့်တွင်တိတ်တဆိတ် huddle ရန်အဘို့အသို့သော်ဤကာလအတွင်းပုံမှန်အပြုအမူဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်အမူအကျင့်ဖိနှိပ်မှုကိုပိုပြီးထိုးဖောက်အစီအမံမပါဘဲ detect လုပ်ဖို့ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းစွဲလမ်းတ္ထုများမကြာခဏလူမှုရေး Bond modulate သောတူညီဗဟိုလမ်းကြောင်းပစ်မှတ်ထား။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှု mesolimbic dopamine system ပေါ်တွင်အာရုံစူးစိုက်သော်လည်းဗဟို opiate စနစ်များလူမှုရေး Bond တစ်ကဏ္ဍမှပါသတိပြုရမည် (Panksepp et al ။ , 1997), နှင့်လည်းစွဲလမ်းတ္ထုများ၏ပစ်မှတ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် (de Vries နှင့် Shippenberg, 2002) အစိတ်အပိုင်းအတွက် dopamine နှင့်အတူ interaction ကမှတဆင့် (Koob et al ။ , 1998) ။ ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်လူမှုရေး Bond အကြားအပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုဖြစ်ပေါ်နေလျှင်, မူးယစ်ဆေးဝါးမှတုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်ဗဟိုလုပ်ငန်းဆောင်တာအတွက်အပြောင်းအလဲ pair တစုံ-နှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးနှင့်ဆုပ်ကိုင်ထားမှုကို-အပြန်အလှန်ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ D1 receptors (နှင့်ဆက်စပ်ပြလမ်းကြောင်းပြောင်းလဲပစ်နိုင်ပါတယ်Nestler, 2001), အရာ၏အကို Activation လူမှုရေး Bond ချို့ယွင်း (Aragona et al ။ , 2006) ။ ထို့ကြောင့် monogamous voles အတွက်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများနောက်ပိုင်းတွင်ပိုမိုခက်ခဲလူမှုရေးခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ဖွဲ့စည်းရန်စေအလယ်ပိုင်းအပြောင်းအလဲများကိုထုတ်လုပ်ရန်လိမ့်မည်။ ဘယ်လိုဒီကိုအခြားမျိုးစိတ်မှဘာသာပြန်ဆိုခြင်းငှါ, သေးဆုံးဖြတ်သည်ခံရဖို့ဖြစ်ပါတယ်, သို့သော်ဤရလဒ်များကိုပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုလူ့ Bond များအတွက်သိသာထင်ရှားသောအကျိုးဆက်များရှိနိုင်တယ်လို့အကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဤလုပ်ငန်းကို NIH ထောက်ပံ့ငွေ HD48462 (JTC) နှင့် MH58616 နှင့် DA19627 (ZW) ကထောက်ခံခဲ့သည်
ethylenediamine tetraacetic အက်ဆစ်
Bamshad M က, Novak MA, De Vries GJ ။ လိင်နုံများနှင့်မိဘ၏မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ၏ vasopressin innervation အတွက်လိင်နှင့်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှု, Microtus ochrogaster နှင့် voles Meadows Microtus pennsylvanicus။ J ကို Neuroendocrinol ။ 1993; 5: 247-255 ။ [PubMed]
Becker က JB ။ အီစထိုဂျင်လျှင်မြန်စွာ microdialysis စဉ်အတွင်းစိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် striatal dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်အလှည့်အမူအကျင့် potentiates ။ neuroscience လက်တ။ 1990; 118: 169-171 ။ [PubMed]
ခေါင်းလောင်း NJ, Forthun LF, Sun က SW ။ attachment, ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအရည်အသွေးနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှု: အန္တရာယ်အပြုအမူတွေ၏လေ့လာမှုမှာ Developmental ထည့်သွင်းစဉ်းစား။ Subst Subst အသုံးပြုမှုလွဲအသုံးပြုခြင်း။ 2000; 35: 1177-1206 ။ [PubMed]
Curtis JT, လျူ Y ကို, Aragona BJ, ဝမ် ZX ။ Dopamine နှင့်မယား။ ဦးနှောက် Res ။ 2006; 1126: 76-90 ။ [PubMed]
Curtis JT, အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံ Bond အတွက်ဝမ် Z. Ventral tegmental ဧရိယာပါဝင်ပတ်သက်မှု။ Physiol ပြုမူနေ။ 2005; 86: 338-346 ။ [PubMed]
ကုရှ BS, မာတင် Jo, Young က LJ, Carter က CS ။ မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအပေါ် peptides ၏သက်ရောက်မှုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်ကျက်စားရာနေရာအားဖြင့်ခန့်မှန်းနေကြသည်။ Horm ပြုမူနေ။ 2001; 39: 48-58 ။ [PubMed]
de Vries တီဂျေ, Shippenberg TS ။ opiate စွဲအခြေခံအာရုံကြောစနစ်များကို။ J ကို neuroscience ။ 2002; 22: 3321-3325 ။ [PubMed]
Dewsbury DA ။ Muroid ကြွက်၏ 42 မျိုးစိတ်ပေါ်ဓာတ်ခွဲခန်းဒေတာကနေလယ်ပြင်၌ရှိသောမယား၏ခန့်မှန်းချက်များတွင်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခု။ ဇီဝဗေဒပညာရှင်။ 1981; 63: 138-162 ။
di Chiara G. အနျူကလိယ shell ကိုနှင့်အဓိက dopamine accumbens: အပြုအမူများနှင့်စွဲလမ်းအတွက် differential ကိုအခန်းကဏ္ဍကို။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2002; 137: 75-114 ။ [PubMed]
Ellickson PL, Collins RL, ဘဲလ် RM ။ ဆေးခြောက်ထက်အခြားတရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအသုံးပြုမှု: လူမှုရေးစဘွန်းနှင့်အရာအဘို့အကျင့်ဝတ်အုပ်စုများကဘယ်လိုအရေးကြီးသလဲ Subst အသုံးပြုမှုလွဲအသုံးပြုခြင်း။ 1999; 34: 317-346 ။ [PubMed]
Getz ll, Carter က CS, Gavish အယ်လ်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole ၏မိတ်လိုက်စနစ်, Microtus ochrogaster: pair တစုံ-Bond အဘို့လယ်ပြင်နှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းသက်သေအထောက်အထား။ ပြုမူနေ Ecole Sociobiol ။ 1981; 8: 189-194 ။
Gruder-အဒမ်က S, Getz ll ။ Microtus ochrogaster နှင့် Microtus pennsylvanicus အတွက်မိတ်လိုက်စနစ်နှင့်အဖေဘက်ကအမူအကျင့်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်။ J ကိုနို့တိုက်သတ္တဝါများ။ 1985; 66: 165-167 ။
Havassy, ​​Wasserman DA, ခန်းမသည် SM BE ။ အမေရိကန်ကုသမှုနမူနာထဲမှာကိုကင်းအနေဖြင့်လူမှုဆက်ဆံရေးနှင့် abstinence ။ စွဲလမ်း။ 1995; 90: 699-710 ။ [PubMed]
Heidbreder ကို C, Feldon ဂျေဖက်တမင်းဆေးပြား-သွေးဆောင် neurochemical နှင့် locomotor တုံ့ပြန်မှုဟာနျူကလိယ accumbens ၏ core နဲ့ shell ကို subterritories ၏ anteroposterior ဝင်ရိုးတစ်လျှောက် differential ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ synapses ။ 1998; 29: 310-322 ။ [PubMed]
Hofmann je, Getz ll, ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ၏ Gavish အယ်လ်မူလစာမျက်နှာအကွာအဝေးထပ်နှင့်အသိုက်တွဲပြီး။ နံနက် Midl နတ်။ 1984; 112: 314-319 ။
Howes SR, Dalley JW, Morrison CH, Robbins TW, Everitt BJ ။ အထီးကျန်-မွေးကြွက်များတွင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏ဝယ်ယူအတွက်ဘယ်ပြပြောင်းကုန်ပြီ: အနျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine, serotonin နဲ့အချိုမှု၏ extracellular အဆင့်ဆင့်မှကြားဆက်ဆံရေးနှင့် amygdala- striatal FOS စကားရပ်။ Psychopharmacology (Berl) 2000; 151: 55-63 ။ [PubMed]
Insel TR ။ လူမှုရေးပူးတွဲမှုတစ်ခုစွဲလမ်းဖရိုဖရဲဖြစ်သနည်း Physiol ပြုမူနေ။ 2003; 79: 351-357 ။ [PubMed]
Insel TR, Preston က S, Winslow JT ။ အမူအကျင့်အကျိုးဆက်များ: အ monogamous အထီးအတွက်အဖော်ရှာ။ Physiol ပြုမူနေ။ 1995; 57: 615-627 ။ [PubMed]
ဂျုံးစ် SR, Gainetdinov RR, Jaber M က, Giros B, Wightman RM, caron MG ။ အဆိုပါ dopamine ပို့ဆောင်ရေး inactivation တုံ့ပြန်လေးနက်တဲ့အာရုံခံ plasticity ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1998; 95: 4029-4034 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Kaestner R. လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းနှင့်အိမ်ထောင်ရေးတည်ငြိမ်မှုအပေါ်ကိုကင်းနှင့်ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်း၏ဆိုးကျိုးများ။ စီးပွားရေးသုတေသနလုပ်ငန်းစက္ကူအဘယ်သူမျှမ 5038 အမျိုးသားဗျူရို; 1995 ။
Kalivas PW, Duffy P. ပြန်လုပ်ကင်းအုပ်ချုပ်ရေးအတွက် ventral tegmental ဧရိယာ၌ extracellular အချိုမှုပွောငျးလဲ။ J ကို Neurochem ။ 1998; 70: 1497-1502 ။ [PubMed]
ဆယ်ကျော်သက်မိခင်များမှ preadolescent childrenborn အပေါ်မိခင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းနှင့်ဘဝအတှေ့အကွုံ Kandel DB, Rosenbaum E ကို, ချန်ကေသက်ရောက်မှု။ J ကိုအိမ်ထောင်ရေး Fam ။ 1994; 56: 325-340 ။
ချေးငှား DH, Smith က EO ။ အီဗိုလူးရှင်း biopsychosociality နှင့်တွေ့ဆုံ: စွဲလမ်းအပြုအမူတစ်ခုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ စွဲလမ်း။ 2002; 97: 447-458 ။ [PubMed]
Lim က MM, Nair HP က, Young က LJ ။ မျိုးစိတ်နှင့် monogamous နှင့်ကရာ vole မျိုးစိတ်အတွက် corticotropin-releasing အချက်အဲဒီ receptor Subtype 1 နှင့်2၏ဦးနှောက်ဖြန့်ဖြူးအတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ J ကို comp Neurol ။ 2005; 487: 75-92 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Nestler EJ ။ စွဲအခြေခံရေရှည် plasticity ၏မော်လီကျူးအခြေခံ။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2001; 2: 215-215 ။ [PubMed]
Orsini ကို C, Buchini က F, Piazza PV, Puglisi-Allegra S က, Cabib အက်စ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်ရာအရပျ preference ကိုမှမောက်အတွက်အသစ်အဆန်းများနှင့်စိတ်ကြွဆေးမှ locomotor တုံ့ပြန်မှုများကခန့်မှန်းထားသည်။ Psychopharmacology (Berl) 2004; 172: 264-270 ။ [PubMed]
Panksepp J, Nelson E, Bekkedal M. Brain စနစ်များသည်လူမှုရေးခွဲခြာမှု - စိတ်ဆင်းရဲမှုနှင့်လူမှုဆုလာဘ်အတွက်ဖျန်ဖြေခြင်းအတွက်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာဆင့်ပွားများနှင့် neuropeptide ကြားခံများ။ Integr Neurobiol Affiliation ။ 1997; 807: 78-100 ။ [PubMed]
Paxinos, G, Stereotaxic Coordinates အတွက် Watson ဟာ C. အဆိုပါ Rat ဦးနှောက်။ စတုတ္ထ Edition ကို။ နယူးယောက်: ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း; 1998 ။
Recio Adrados JL ။ ဆယ်ကျော်သက်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုအပေါ်မိသားစု, ကျောင်းနှင့်ရွယ်တူများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ int J ကိုစွဲလမ်း။ 1995; 30: 1407-1423 ။ [PubMed]
ကိုယ်ပိုင် DW, Genova LM, မျှော်လင့်ခြင်း BT, Barnhart WJ, Spencer JJ, Nestler EJ ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ၏ relapse အတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက်စခန်း-မှီခိုပရိုတိန်း kinase ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ J ကို neuroscience ။ 1998; 18: 1848-1859 ။ [PubMed]
Shapiro LE, Dewsbury DA ။ vole (Microtus ochrogaster နှင့်အမ် montanus) J ကို comp Psychol နှစ်ခုမျိုးစိတ်အတွက် Affiliate အပြုအမူအတွက်ကွာခြားချက်များ, pair တစုံဘွန်းနှင့်အင်္ဂါဇာတ် cytology ။ 1990; 104: 268-274 ။ [PubMed]
အဆိုပါ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယထဲတွင် vasopressin-immunoreactive လမ်းကြောင်းအတွက်ဝမ် Z. မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုနဲ့မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် amygdaloid နျူကလိယ medial (Microtus ochrogaster) နှင့်မြက်ခင်း voles (Microtus pennsylvanicus) ပြုမူနေ neuroscience ။ 1995; 109: 305-311 ။ [PubMed]
ဝမ် Z ကို, စမစ် W ကဗိုလ်မှူး DE, De Vries GJ ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles (ထဲတွင် stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယအတွက် vasopressin စကားရပ်အပေါ်တွဲပြီး၏ဆိုးကျိုးများအတွက်လိင်နှင့်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုMicrotus ochrogaster) နှင့်မြက်ခင်း voles (Microtus pennsylvanicus) ဦးနှောက် Res ။ 1994; 650: 212-218 ။ [PubMed]
Weatherford SC, Greenberg: D, Gibbs J ကို, Smith ကမိသားစုဆရာဝန်။ D-1 နဲ့ D-2 အဲဒီ receptor ရန်များ၏အာနိသင်ပြောင်းပြန်ကြွက်များတွင်အတုအယောင်-အောင်ကျွေးပြောင်းဖူး-ရေနံနှင့် sucrose ၏အကျိုးကိုတန်ဖိုး related ဖြစ်ပါတယ်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1990; 37: 317-323 ။ [PubMed]
Williams က JR, Catania KC, Carter က CS ။ အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles (Microtus ochrogaster) တွင်မိတ်ဖက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး: လူမှုရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Horm ပြုမူနေ။ 1992; 26: 339-349 ။ [PubMed]
Yamaguchi K သည် Kandel DB ။ အခန်းကဏ္ incom သဟဇာတ၏ resolution ကို - မိသားစုအခန်းကဏ္ and နှင့်ဆေးခြောက်အသုံးပြုမှု၏ဘဝဖြစ်ရပ်သမိုင်းသမိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ နံနက် J ကို Sociol ။ 1985; 90: 1284-1325 ။
Young ကလေး, Rees KR ။ ဦးနှောက် microdialysis နေဖြင့်လေ့လာကြွက်များ၏ amygdaloid ရှုပ်ထွေးအတွက် Dopamine လွှတ်ပေးရန်။ neuroscience လက်တ။ 1998; 249: 49-52 ။ [PubMed]
yun IA, Wakabayashi KT, Fields HL, Nicola သည် SM ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာအတွက်အမူအကျင့်များနှင့်နျူကလိယမက်လုံးပေးတွေကိုမှအာရုံခံပစ်ခတ်ရန်တုံ့ပြန်မှု accumbens ဘို့လိုအပ်ပါသည်။ J ကို neuroscience ။ 2004; 24: 2923-2933 ။ [PubMed]
Yurek DM, Hipkens SB, Hebert MA, ရှ DM, Gerhardt GA ။ အညိုရောင်နော်ဝေ / Fischer 344 စပ်ကြွက်များတွင် striatal dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်မော်တော် function ကိုအတွက်ခေတ်-related ကျဆင်း။ ဦးနှောက် Res ။ 1998; 791: 246-256 ။ [PubMed]
Zocchi တစ်ဦးက, Girlanda အီး, Varnier, G, Sartori ငါ Zanetti L ကို, Wildish GA, Lennon M က, Mugnaini M က, Heidbreder CA. အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှ Dopamine တုန့်ပြန်: မောက်၏နျူကလိယ accumbens တစ် shell ကို-Core စုံစမ်းစစ်ဆေး။ synapses ။ 2003; 50: 293-302 ။ [PubMed]